कसरी छाड्ने धूमपान? धूमपान तथा सूर्ती सेवन छाड्ने दिनमा गर्नुपर्ने १० कुरा
बैशाख ६, २०७५ बिहिवार ०६:५१:०७
धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि धरै मानिसले यसको लत छाड्न सक्दैनन्। धूमपान त्याग गरेमा हृदयाघात, रक्तनलीसम्बन्धी समस्या, क्यान्सर तथा मष्तिष्काघातबाट मृत्यु हुने जोखिम कम हुन्छ । धूमपान छाड्न चिकित्सकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा साथी तथा सहकर्मीबाट सह...
बैशाख ५, २०७५ बुधवार १८:३९:०७
हिन्दू धर्ममा कैयांै प्रकारका धार्मिक तौरतरिका छन्, जसको हाम्रो जीवनमा गहिरो महत्व छ। कतिपय यस्ता कार्यका पछाडि वैज्ञानिक कारण पनि छन् । प्राचीन परम्पराहरु हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउन बनाइएको पाइन्छ । यस्तै एक परम्परा हो शंख बजाउनु । हिन्दू धर्ममा शंखको महत्वपूर्ण स्थान छ। शं...
बैशाख ४, २०७५ मगलवार १४:०८:०८
मानिसको शरीरमा हुने रगत कयौं प्रकारका कोषिकाहरु मिलेर बनेको हुन्छ । शरीरमा चोट लाग्दा या काट्दा रगत आउछ । रगत तरल हुन्छ । यसैले कुनै एक स्थानमा चोट लाग्दा शरीरको पूरै रगत बाहिर निस्कनुपर्ने हो । तर यस्तो हुँदैंन । प्रकृतिले नै रगतलाई शरीरबाहिर आउनेबित्तिकै जम्ने र ...
यी हुन् राम्रो स्वास्थ्यका २० संकेत
बैशाख १, २०७५ शनिवार ०९:१९:०५
डा रविनलाल श्रेष्ठ साधारणतया स्वस्थ हुनु भनेको शरीरले आफ्नो क्रियाहरू बिना कुनै गतिरोध, बिना कुनै अप्ठ्यारो, हामीलाई असजिलो महसुस नगराईकन गर्नुका साथै मन सकारात्मक र प्रशन्न हुनु हो। जब शरीरले हामीलाई कुनै असजिलो महसुस नगराईकन आफ्ना जैविक क्रियाहरू गर्छन्, साथै जबे...
चैत ३०, २०७४ शुक्रवार १५:५२:३१
युवाहरुमा आजकाल मूत्राशय क्यान्सरको खतरा तीब्र रुपमा बढिरहेको छ। यो क्यान्सर अण्डकोशमा हुन्छ । अण्डकोशले शरीरमा टेस्टोस्टेरोन तथा अन्य कयौं महत्वपूर्ण हर्मोन उत्पादन गर्छ । वीर्यकोषका कोशिकाहरुको अनियन्त्रित वृद्धिबाट नै मूत्राशय क्यान्सर हुन्छ । वीर्यकोश प्रजनन कोशिकाहरुका लागि...
चैत २८, २०७४ बुधवार ११:३९:००
हाइपरटेन्सन, बाथ, दम, छालाका समस्या, एनिमिया, मोटोपना, कब्जियत, मधुमेह, मिर्गौला तथा मुटुका समस्या छ भने जौको फाइदाबारे एकपटक जान्ने प्रयास गर्नुस् । यसमा मानिसलाई अति आवश्यक ८ प्रकारका अमिनो एसिड पाइन्छन् । यसको अर्थ हो, हामीलाई भोजनमा आवश्यक पर्ने सबैखालका प्रोटिन यस...
नुन : भ्रम र यथार्थ
चैत २७, २०७४ मगलवार १७:२३:००
नुन हाम्रो दैनिक खानाको मात्र नभई जीवनको पनि महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तर ‘अति ले हानी गर्छ’ भनेझैं आवश्यकताभन्दा बढी नुन सेवनले कयौं प्रकारका गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछन्। नुन अर्थात् सोडियक क्लोराइड एक प्रकारको खनिज हो। कुनै पनि प्रकारका खनिज पदार्थको ब...
चैत १९, २०७४ सोमवार १६:०६:००
हुर्कंदै गरेका बालबालिका परिवार तथा अन्य व्यक्तिसँग घुलमिल हुन रुचाइरहेका छैनन् । एक्लै बस्न मनपराइरहेका छन् वा आफन्तसँग पनि घुलमिन हुन र सामाजिक व्यवहार गर्न कठिनाइ मानिरहेका छन् भने त्यस्ता बालबालिकालाई अटिजम भएको हुन सक्छ । अटिजम मस्तिष्कका स्नायु कोषहरुको स्वाभावि...
चैत १८, २०७४ आइतवार ११:४९:००
दही दुधलाई फर्मेन्टेसन गरी बनाइन्छ । यो क्रियालाई दूध सुरक्षित राख्ने एक विधिको रुपमा पनि लिन सकिनछ । किनकि दहीलाई दिनसम्म चिसोमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने दूधलाई यसरी राख्दा ब्रिग्रिन्छ। दही बनाउने समयमा दूधमा प्रयोग गरिने जोडनको माध्...
नाकबाट रगत बग्ने यस्ता छन् कारण
चैत १७, २०७४ शनिवार २२:०१:००
नाक हाम्रो शरीरको निकै संवेदनशील अंग हो। सानो चोटपटक वा अन्य केही समस्या भएमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। गर्मीयाम लागेसँगै विभिन्न संक्रमणका कारण नाक सुक्खा हुँदा नाथ्री फुटेर रगत बग्ने समस्या यतिबेला बढी देखिन थालेको छ। नाकबाट रगत बग्ने विभिन्न कारण भए पनि ...
चैत १५, २०७४ बिहिवार १९:२२:००
आजकाल किशोरकिशोरीहरु कानमा एयरफोन लगाएर हिडिरहेका देखिन्छन् । पकेटमा मोबाइल या आइपड, कानमा एयरफोन फेसनजस्तै चलेको छ । तर, संगितको यो आनन्द जीवनभरका लागि सजाय बन्न सक्छ भन्ने कुराचाहिँ कसैले पनि ख्याल गरेको देखिँदैंन । एयरफोनको आवाजले बहिरोपन निम्त्याउन सक्ने अनुस...
चैत १४, २०७४ बुधवार १७:२१:००
‘नानी रोएको छ, भोक लाग्यो होला, खुवाइहाल’ ‘नानीलाई छिटो दुध खुवाउनु’ शिशुका आमालाई घरपरिवारले यस्ता कुरा भनिरहन्छन्, सम्झाइरहन्छन्। अर्थात् धेरैको ध्यान शिशुमा हुन्छ। तर शिशुलाई दुध खुवाउनुपर्ने भएका...
चैत १३, २०७४ मगलवार २०:०२:००
आजकाल कम उमेरमा कपाल झर्ने समस्याबाट मानिसहरु पीडित भइरहेका हुन्छन् । कपाल झर्नुमा विभिन्न कारण हुन्छन् । तीमध्ये एक हो खानपानमा लापरवाही । यदि खानामा प्रोटीनको कमी भयो भने कपाल झर्ने समस्या हुन सक्छ । यसैले प्रोटीन र आइरनयुक्त खाद्यपदार्थ खानुपर्छ । हरियो सागसब्जी, अण्डा...
चैत १२, २०७४ सोमवार ११:५९:००
एउटा उखान छ– ‘हामी दाँतले आफ्नै चिहान खनिरहेका हुन्छौं ।’ यसको सार हामीले खाने खानाले स्वास्थ्यमा गर्ने असर र प्रभाव नै हो । तसर्थ खाना खाँदा जिब्रोकोे स्वादका लागि होइन, शरीरको स्वास्थ्यका लागि हेक्का राख्नुपर्छ । हृदयाघात निम्त्याउने एयाथिरो...
चैत ११, २०७४ आइतवार १९:४२:००
सामान्यतः साना बच्चाहरुले कपडामै पिसाब गर्छन् । जब उनीहरु ठूला हुन्छन्, बिस्तारै दिसापिसाब केहीबेर रोक्न सिक्छन् । तर केही मानिसमा वयस्क भएपछि पनि पिसाब रोक्न नसक्ने समस्या रहिरहन्छ । केही मानिसमा बानीका कारण हुनसक्ने भएपनि अधिकांश मानिसमा यस्तो समस्या रोगका कारण हुन्छ ।...
चैत ११, २०७४ आइतवार १८:२७:००
भिटामिन ए भएका तत्वहरुको सेवन समग्र स्वास्थ्य र दीर्घरोगविरुद्धको संरक्षणका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ। दैनिक आहारमा भिटामिन एको उपयोगले रोगप्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धिका हुनुका साथै दृष्टि, छाला र श्वासप्रश्वास स्वास्थ्यमा उपयोगी हुन्छ । भिटामिन एको कमी गर्भवती महिला लागि खतरापू...
चैत ११, २०७४ आइतवार ११:३९:००
पानी र जीवनको गहिरो सम्बन्ध भएझैँ पानी र स्वास्थको पनि गहिरो सम्बन्ध छ । पानीको मात्रा, पिउने समय र पिउने तरिकाले स्वास्थ्य लाभ वा हानीको निर्धारण गर्दछ । हाम्रो शरीरको २/३ भाग पानीले बनेको हुन्छ । पानी बिना शरीर भित्रका कुनै पनि क्रियाहरू सम्भव हुँदैनन् । शरीरका...
स्वाद बढाउन प्रयोग गरिने एमएसजी के हो ? यी हुन् ७ हानी
चैत ९, २०७४ शनिवार ००:४८:१३
एजेन्सी– आजकाल अधिकांश मानिसहरु फास्टफुडको सौखिन छन्। रेष्टुरेन्ट गएर स्वादिलो फास्टफुड खानु मानिसहरुको बानी नै भैसकेको छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ, यसो गर्दा तपाईंहरु जानी नजानी मोनो सोडियम ग्लुटामेटको भरपूर सेवन गरिरहनुभएको छ। सायद अधिकांश मानिसलाई मोनो स...
चैत ८, २०७४ बिहिवार १९:११:४९
१. एक पिन्ट (५६८ मिलि) बियर उत्पादन गर्न १ सय ५० लिटर पानी लाग्छ । २. विश्वका ७८ करोड मानिसहरु स्वच्छ पानीको अभावबाट पीडित छन् । ३. मानिसको मष्तिष्कमा ७० प्रतिशत पानी हुन्छ । ४. अस्वस्थ पानीले विश्वमा हरेक घन्टा २ सय बालबालिकाको ज्यान जाने गर...